အောက်တိုဘာလအစည်းအဝေးတွင် STEM အလုပ်အကိုင်တွင်မတူကွဲပြားခြင်းကိုစူးစမ်းလေ့လာမည့်ဟောလိဝုဒ်အပိုင်း SMPTE | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » SMPTE ဟောလိဝုဒ်ပုဒ်မအောက်တိုဘာလအစည်းအဝေးတွင် stem အလုပ်အကိုင်အတွက်မတူကွဲပြားခြင်း Explore မှ
Los Angeles - အ ဟောလိဝုဒ် ပုဒ်မ SMPTE®, အဘယ်သူ၏စံချိန်စံညွှန်းများအလုပ်ဖျော်ဖြေရေးနည်းပညာတိုးတက်လာတစ်ရာစုထောက်ခံထားပါတယ်အဖွဲ့အစည်း, အောက်တိုဘာသိပ္ပံ, နည်းပညာ, အင်ဂျင်နီယာနှင့်ကြာသပတေးနေ့ဘို့စီစဉ်ထားသည်၎င်း၏လစဉ်အစည်းအဝေးတွင်သင်္ချာ (stem) ခွက်တဆယ်အတွက် သာ. ကြီးမြတ်မတူကွဲပြားမှုများအတွက်ဖျော်ဖြေရေးစက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့လိုအပ်ချက်ဆန်းစစ်ပါလိမ့်မယ် အတွက် 11, ဟောလိဝုဒ်.
"ဖျော်ဖြေရေးစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်စတူဒီယို, ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီများ, postproduction အဆောက်အဦနှင့်အခြားအလုပ်ရှင်များကို stem စည်းကမ်းများကိုအတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြားခွက်တဆယ်လိုပါတယ်" ဟုကဆိုသည် SMPTE ဟောလိဝုဒ် 3rd ဈဒစ်ဂျစ်တယ်မှာပုဒ်မ Manager ကို Ramon Breton, CTO ။ "အရည်အသွေးမြင့်နည်းပညာသမားနောက်ထပ်ရွေ့လျားမှုပုံထဲမှာတိုးတက်မှုနှင့်ထုတ်လွှင့်အကြောင်းအရာဖန်တီးမှုပိုဆိုးဖို့မရှိမဖြစ်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သုတေသနရှုပ်ထွေးသောပြဿနာများဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေအတွက်ကြောင့်မတူကွဲပြားအမြင်များနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအပေါ်ကိုဆွဲရန်စိုးရိမ်ရမယ့်, ထိုသရုပ်ပြခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကုမ္ပဏီတွေဟာသူတို့ stem ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်ရာထူးဖြည့်အဖြစ်, အရောင်ပိုအမျိုးသမီးများနှင့်လူဦးအပါအဝင်တစ်ဦးထက်ပိုသောကွဲပြားခြားနားခွက်တဆယ်ရေကူးကန်, ဆွဲဆောင်ယူနိုင်ပါသည်ခြေလှမ်းများအကြောင်းပြောဆိုပါလိမ့်မယ်။ "
At SMPTE ဟောလိဝုဒ် ပုဒ်မရဲ့အောက်တိုဘာလအစည်းအဝေးအလွန်အောင်မြင်သော stem ပညာရှင်များ၏အုပ်စုတစုတွင်ပိုမိုပါဝင်အားပေးဖို့ဘယ်လိုပေါ်သူတို့ရဲ့အသိအမြင်ကိုမျှဝေပါလိမ့်မယ် ဟောလိဝုဒ် နည်းပညာစီမံကိန်းများ။ တိုတောင်းသောတင်ပြချက်များနှင့် panel ကဆွေးနွေးတဲ့စီးရီးမှာတော့သူတို့အလုပ်ရှင်၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်နှင့်အလုပ်ရှင်များကသူတို့ကိုများ၏ရှေ့မှောက်၌မကြာခဏညာဘက်ကြောင်းဝှက်ထားသောအခွက်တဆယ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သောနည်းလမ်းများကိုအကြံပြုဖို့ဘယ်လိုပေါ်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေကြ stem မှအကြံပြုချက်များကိုပူဇော်ပါလိမ့်မယ်။
သင်တန်းသားများကို (အထကျ, လက်ဝဲမှလက်ျာဘက်ပြ) အောက်ပါတို့ပါဝင်သည်ပါလိမ့်မယ်:
Alexis Lewis က၏ရုံးခန်းမှာစီးပွားရေးမူဝါဒအဘို့, စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာမန်နေဂျာ Los Angeles မြို့ မြို့တော်ဝန်အဲရစ် Garcetti ။ Lewis ကအဆိုပါအဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာ Entertainment ကရန်ပုံငွေအဖွဲ့, ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းတွင်မတူကွဲပြားမှုကိုတိုးမြှင့်ဖို့မြို့တော်ဝန်ရဲ့ရုံးကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ပဏာမဆွေးနွေးခြင်းလိမ့်မည်။
Nadya Ichinomiyaလုပ်ငန်းသွက်လက်ေူပာင်းလဲရေးကိုအတွက်အိုင်တီ၏, ဒါရိုက်တာမှာ Sony က ရုပ်ပုံများ Entertainment ကနှင့်နည်းပညာများတွင်အမျိုးသမီးများ၏ပူးတွဲတည်ထောင်သူ: ဟောလိဝုဒ် (အတူ) ။
Meaghan WilburPost ကိုစုပေါင်းအပြာရောင်ကော်လာ (BCPC) မှာ mentorship ၏, အယ်ဒီတာ / လုပ်ငန်းအသွားအလာအင်ဂျင်နီယာနှင့်ဒါရိုက်တာ။
တွမ် Roach, Warner Bros. Entertainment က Group မှာနည်းပညာ၏အကြီးတန်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ။ Roach "ဟုအဆိုပါလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ Neurodiversity ။ " ဆွေးနွေးကြမည်
ယောဟနျသ Tarnoff, reinvention အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနည်းပြနှင့် "Boomer Reinvention - မည်သို့သင့်ရဲ့အိပ်မက်ထဲကအလုပ်ရှာဖွေရေးကျော် 50 Create ဖို့" ရေးသားသူ။
ထိုအဖြစ်အပျက်၏ထုတ်လုပ်သူများ Breton ပါဝင်သည်; Jeanette DePatie, Propellerhead မှာခဲစာရေးဆရာ / ထုတ်လုပ်သူ; Kyle Pena, Netflix မှာညှိနှိုင်းရေးမှူးဖန်တီးမှုနည်းပညာများနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦများ, နှင့်ဘရိုင်ယန် Quandt, M & E ဆော့ဖ်ဝဲအင်ဂျင်နီယာ။
ဘာ: SMPTE ဟောလိဝုဒ် ပုဒ်မ, အောက်တိုဘာလအစည်းအဝေး
Topic: အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ခြင်း: Entertainment ကနည်းပညာအတွက်မတူကွဲပြားခြင်းနှင့်အားလုံးပါဝင်နိုင်
ဘယ်တော့လဲ: ကြာသပတေးနေ့အောက်တိုဘာ 11, 6: 30 ညနေ - Reception, 7: 30 ညနေ - အစည်းအဝေး
အဘယ်မှာ: Motion Picture ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံ (AMPAS), Linwood Dunn ပြဇာတ်ရုံ, 1313 ဗိုစိန့်၏အကယ်ဒမီ Los Angeles မြို့,, CA 90028 ။ အခမဲ့ယာဉ်ရပ်နားအဆောက်အဦးနောက်ကွယ်မှရရှိနိုင်ပါသည်။
ကျော်ရာစုအဘို့, Motion Picture နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာများ၏ Society ရဲ့လူအ, ဒါမှမဟုတ် SMPTE ( "simp-Tee" အသံထွက်), ကို "talkies" ၏နိဒါန်းနှင့်အရောင်ရုပ်မြင်သံကြားကနေရန်, မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးနည်းပညာများစွာကိုသိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှု၏အသေးစိတျအထဲကခွဲထားခဲ့သည်ပါပြီ HD နှင့် UHD (4K, 8K) TV ကို။ 1916 အတွက်၎င်း၏တည်ထောင်ကတည်းက SMPTE စက်မှုလုပ်ငန်းအနှံ့ရွေ့လျားနေသည့်-ပုံရိပ်အင်ဂျင်နီယာတိုးတက်၎င်း၏အလုပ်တစ်ခုOscar®နှင့်မျိုးစုံEmmy®ဆုပေးပွဲကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ SMPTE အင်အားသုံးလက်ရှိယနေ့များမှာ 800 ထက်ပိုသောစံချိန်စံညွှန်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏, အကြံပြုအလေ့အထများနှင့်အင်ဂျင်နီယာလမ်းညွှန်ချက်များ, တီထွင်ခဲ့သည်။ SMPTE အချိန် Code ကို™နှင့်နေရာအနှံ့ SMPTE အရောင်ဘား၏နေကြသည်ရုံဥပမာနှစ်ခုကို™ SMPTE'' s ကိုမှတ်သားလောက်အလုပ်။ အခုဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒုတိယရာစုအတွက်, SMPTE စံချိန်စံညွှန်းများရဲ့နောက်မျိုးဆက်ပုံဖော်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်း IT- နှင့် IP-based Workflows သို့ထပ်မံတစတစတိုးတက်ပြောင်းလဲလာအဖြစ်အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါသေချာစေရန်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ပညာရေးထောက်ပံ့နေသည်။
SMPTE ရွေ့လျားမှုပုံရိပ်များ၏အရည်အသွေးနှင့်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုမောင်းတဲ့သူနည်းပညာသမားတွေနဲ့ဖန်တီးမှုများတစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသင်းအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ရွေ့လျားမှု-ပုံရိပ်အမှုဆောင်အရာရှိ, ဖန်တီးမှုများ, နည်းပညာသမား, သုတေသီများနှင့်ကျောင်းသားများအဖို့သူတို့ရဲ့အချိန်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုစတေနာ့ဝနျထမျးသူက၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်ယနေ့ 7,000 တစ်ဦးချင်းစီထက် ပို. ပါဝင်သည် SMPTE'' s ကိုစံချိန်စံညွှန်းများဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ပညာရေးအစပျိုး။ ယင်းနှင့်အတူတစ်ဦးကမိတ်ဖက် ဟောလိဝုဒ် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသင်း (HPA) connection SMPTE နှင့်မီဒီယာအကြောင်းအရာ၏ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်ပြီးပံ့ပိုးကူညီသူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူ၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်။ ပူးပေါင်းအပေါ်ပြန်ကြားရေး SMPTE မှာရရှိနိုင် smpte.org/join.
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ SMPTE SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows တီဗီနည်းပညာ က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2018-09-28
ယခင်: အကြီးတန်းအဆိုတော်များ၏လက်မှတ်ထိုးခြင်းနှင့်၎င်း၏ပိုက်လိုင်း၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့်အတူ VFX Legion Marks 5th နှစ်မြောက်
နောက်တစ်ခု: အလွတ်တန်းလက်ထောက်အသံအင်ဂျင်နီယာများ - A2